Kiiniya oo dib u bilowdey dhulboobka ka wado xad beenaadka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kadib fashilkii weynaa ee ka raacay Baladxaawo ayaa Kiiniya dib u bilowdey dhulboobka ay ka wado xad beenaadka sida uu xaqiijiyay sarkaal sare ka tirsan milatariga Somaliya ee cayrsaday maleeshiya Kiiniya wadatey.
“Waxa Kiiniya dib u bilowdey dhismaha derbiga ay ku boobayso dhulka Somaliyeed oo ujeedadu tahay inay abuurto xaalad dhulka ah. Derbigaas oo ku wajahan ilaa baddeena ay ku murmayso ayuu yiri sarkaal Aadan Rafle.
Dhawaan ayay ahayd markii ay isku dayeen inay dhulboobkaas ka fuliyaan Baladxaawo laakiin dadka shacabka ah Ka gadoodeen kadibna ay joojisay, ayadoo Ku marmarsiiyo Ka dhiganaysa waxaan iska xireynaa argagixisada.
Sarkaal Aadan Rafle ayaa ugu baaqay shacabka deegaanada Kulbiyow, Hoosingow, Raaskambooni iyo Badhaadhe inay u kacaan dalkooda.